01-22-2012 08:23 AM
Posts 188	Thanks 5,124
Rep Power0Vaccinia virus
Reply With Quote The Following3Users Say Thank You to rolley For This Useful Post:
dudugyi, phyo, ကိုထွန်း 01-22-2012 08:38 AM
Rep Power08. medication in pregnancy
Like many families affected by birth defects, CDC wants to find out what causes them. Understanding risk factors, such as certain medications, that might increase the chance of havingababy withabirth defect will help us learn more about the causes. Better information on the safety or risk of specific medications will allow women and their doctors to make informed decisions about treatment during pregnancy. Antibiotics and Birth Defects
We also looked at the link between antibiotics and birth defects. Antibiotics most used were penicillins, erythromycins, and cephalosporins. Generally, women who used these drugs did not show greater risk for birth defects. But we did see some links between the drugs sulfonamides (such as Bactrim) and nitrofurantoins (such as Macrobid) and birth defects. Women most often use these drugs for urinary tract infections. But we cannot be sure that the drugs caused the birth defects. It is very important to treat infections. Women should talk to their doctors about which antibiotics are safest to use during pregnancy. Children whose mothers were prescribed the antiseizure medication Image credit to :http://3.bp.blogspot.com/-7v9J6FBNaN...d_74054737.jpg
dudugyi, phyo, ကိုထွန်း 01-22-2012 09:13 AM
Rep Power09. vaginal discharge in obstetrics
dudugyi, phyo, ကိုထွန်း 01-26-2012 07:24 PM
Posts 253	Thanks 2,809
Rep Power 8 ဟုတ်တယ် အကို၊ အဖြူဆင်းတယ်ဆိုတာကလည်း yeast အနေနဲ့ သဘာဝအတိုင်း၊ ဆင်းတာရှိသလို vaginal yeast infection နဲ့ cervical infection တို့ကြောင့် ဆင်းတာရှိပါတယ်။ vaginal discharge ဆိုတဲ့ သဘာဝအတိုင်းမွေးတဲ့အခါ၊ vaginal yeast infection ရှိနေတဲ့ အမေကြောင့် ကလေးဟာ၊ မျက်စိကွယ်သွားတာရှိပါတယ်။ နောက်တခုက cervical infection ပါ။ အရမ်းကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ ကလေးဟာ တသက်လုံးမသန်မစွမ်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကလေးတွေ ဒူဒူ တွေ့ဖူးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အနောက် နိုင်ငံတွေမှာ မဟုတ်ပဲ အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာပါ။ vaginal yeast infection နဲ့ cervical infection တို့ဟာ အစားအသောက်ထက် တကိုယ်သန့်ရှင်းရေးဆိုတဲ့ personal hygiene ကြောင့် infection အနေနဲ့၊ vaginal ထဲမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် metabolism ဆိုတဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို၊ မချိန်ညှိနိုင်ခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတဲ့ မိခင်တွေမှာလည်း vaginal yeast infection နဲ့ cervical infection ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတဲ့ မိခင်လောင်းတွေမှာပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလတွေမှာ vaginal ဆိုတဲ့၊ မွေးလမ်းကြောင်းထဲမှ acid နဲ့ base အချိုးအဆကို၊ ပုံမှန်တိုင်းရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ တိုင်းမတိုင်း ဒူဒူ မသိပါ။ တိုင်းတာကလည်း လွယ်ပါတယ်။ stick ကလေးနဲ့ sample ယူလိုက် တာပါ။ နောက်နေ့ဆို အဖြေသိရပါတယ်။ လရင့်လာလို့ မွေးကာနီးလေ ပိုသတိထားရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ မို့ ပဋိဇီဝဆိုတဲ့ anti-biotic တွေပေးပြီး၊ yeast တွေကိုလည်းသတ်လို့မရပါဘူး။ due date ရဲ့ (၂) ပါတ်အလိုမှာ ထပ်တိုင်းပြီး၊ yeast ရှိနေတယ်ဆိုရင် ခွဲမွေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါ။ အကို အစုံရေးနိုင်အောင် အချက်အလက်တွေရှာပေးတဲ့ မမဒေါက်တာကိုလည်း၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply With Quote The Following3Users Say Thank You to dudugyi For This Useful Post:
phyo, rolley, ကိုထွန်း 01-26-2012 08:46 PM
Rep Power010. backache in pregnancy
အမေရိကန်ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာ တွေးခေါ်ပညာရှင် Give me six hours to chop downatree, and I will spend the first four hours sharpening the axe.
phoelapyae, phyo, ကိုထွန်း 02-25-2012 05:33 AM
Rep Power0TREATING INJURIES : ARTICLES
1st-degree burns: are limited to the upper skin layer. They produce redness, tenderness, pain, swelling and slight fever. 2nd-degree burns: affect deeper skin layers. Symptoms are more severe and usually include blisters. 3rd-degree burns: involve all skin layers. Area is white and there may be no pain in the initial stages. Scald burns are burns caused by hot liquids and steam. 1st-degree burns: are limited to the upper skin layer. They produce redness, tenderness, pain, swelling and slight fever. ရေနွေးပူလောင်ရင်
Reply With Quote The Following2Users Say Thank You to rolley For This Useful Post:
phyo, ကိုထွန်း + Reply to Thread